Afterpulse waa ciyaarta ma seegi kartid iPhone-kaaga cusub | Wararka IPhone
Afterpulse waa ciyaarta ma seegi kartid iPhone-kaaga cusub
Juan Colilla | | Ciyaaraha IPhone, Waqtiyada firaaqada
Taleefannada casriga ah iyo kumbuyuutarradu waxay ku dhacaan inta u dhexeysa qunsuliyadaha mustaqbalka Si looga guuleysto adduunka qunsuliyadaha la qaadan karo waa xaqiiqo, taasna waxaa og Apple iyo horumariyeyaasha labadaba, halka halka dambe ay malaayiin doolar ka qaateen AppStore iyagoo uga mahadcelinaya cayaaraha fiidiyowga, ha ahaato lacag-bixinnada, xayeysiinta ama bixinta hal mar.
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa mid ka mid ah ciyaaraha fiidiyowga ee soo baxa waqti kasta X, mid ka dhex muuqda kuwa kale inuu ka duwanaado, waxaan ka hadlaynaa Afterpulse, fps ugu horumarsan ee ku saabsan macruufka ilaa taariikhda.
Haddii aad dalbaneyso ciyaartooy oo aad haysatid qalab macruuf ah oo lagu xukumo 64-bit chip, waad nasiib badan tahay, Afterpulse waa jiil cusub oo fps bilaash ah oo ku saleysan si gaar ah Birta API in Apple ay si wada jir ah u sii daayeen macruufka 8 taasna waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka faa'iideysato shaxanka 64 xoogaa jajab ah.
Nidaamka nalalka ee horumarsan iyo qaabab tayo sare leh, waa tan sidee Kadib waxay kugu martiqaadeysaa inaad soo dejiso ciyaarta fiidiyowga iyada oo aan wax kharash ah kugu kicin doonin taas oo kuu oggolaan doonta inaad ku ciyaarto labada degmo iyo khadka tooska ah ee internetka si aad u khasaariso rasaasta illaa aad ka dhammayso cadaawayaashaada.
Waad ku mahadsan tahay nidaamka abaalmarinta maalinlaha ah Waxaan ku hormari karnaa ciyaarta adoo iibsanaya waxyaabaha sida caadiga ah loogu talagalay isticmaaleyaasha wax ku bixiya lacagta dhabta ah, nidaamkan abaalmarinta wuxuu yareynayaa ku dhowaad 0 farqiga u dhexeeya macaamiisha bixineysa iyo kuwa aan hoos u dhigin lacagta shilinka, intaas oo dhanna iyada oo aan xayeysiin ama qiimo la soo degin.
Dabcan way jiri doontaa xirmo gaar ah Iyada oo muuqaalada iyo qalabka loo qoondeeyay bixinta isticmaaleyaasha, hase yeeshe, kuwani way yar yihiin oo wax isbadal ah kama samayn muuqaalka.
Waxaan la kulmi karnaa asxaabteena waana ka qeyb qaadan karnaa dagaal culus oo khadka tooska ah khariidadaha aad u guuleysta ee leh saamaynta iyo qaabdhismeedka cajiibka ah ee leh wax yar ama aan waxba ka hinaasin si loogu tacsiyeeyo cayaaraha (keydinta masaafo macquul ah sida buuxinta faahfaahinta).
Shaki la'aan waxay umuuqataa ciyaar ku saleysan sheekada quraafaadka ah Call Of Duty loogu talagalay qunsuliyadaha, waana taas tan saxda ah, waxaan leenahay ciyaar aad ugu eg Call of Duty oo muuqaalkeedu aad u fiican yahay had iyo jeerna naga raaci doona jeebkeena bilaash iyo miisaan 500MB, waa guul u soo hoyatay horumariyeyaasha (iska jir, waxaa jira cusbooneysiin), shaki la'aan tirooyinkaas waxaa mudan in ugu yaraan la isku dayo.
OGAYSIIS: Kaliya ku habboon qalabka leh 64-bit naqshadaha (A7 chip ama ka sareeya).
Adigana, Wali ma isku dayday? Hadday sidaas tahay, ha ka waaban inaad fikirkaaga uga tagto faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha IPhone » Afterpulse waa ciyaarta ma seegi kartid iPhone-kaaga cusub
Waad salaaman tihiin, waan ciyaaray usbuucii la soo dhaafay waxayna iila muuqatay wax aad iigu wanaagsan, aad ayey u gaabisaa markii aan isku xirayo serverka, mararka qaar wey iskeed u xirmeysaa, sidoo kale waxay ila egtahay inaysan ahayn wax macquul ah markii la tooganayo ... Ma aanan sameyn dhammee qeybta tababarka laakiin waxaan la yaabanahay haddii la ciyaari karo iyadoo la qabanayo hawlgallo sida dagaalka casriga ah 5…. qof ma ii jawaabi karaa?
Waa wax lala yaabo, in kasta oo ay run tahay in ay waqti ku qaadato in ay ku xirmaan serverka, waligey igama xirna kaligey, su’aashaada, waxaa jira qaabka tababarka iyo qaabka internetka oo kaliya, waa ka fps internet ka badan a ciyaarta oo leh sheeko sheeko (maadaama tan ay ka maqan tahay).
Qalab noocee ah iyo nooca iOS-ka ah ayaad isticmaashaa?
iPhone 6, IOS 9.1 ... wixii intaa ka sii badan, waan tirtiray maxaa yeelay umuuqda inaysan ufiicnayn sidii ay kufiirisay muuqaalka filimka trailer ... "feker shaqsiyeed" waxaan qaadan doonaa MC5
BEST MC5 AMA NOVA 3, In kasta oo midkoodna aan khadka tooska ah kula ciyaari karo asxaabteyda inkasta oo ciyaaruhu ay iswaafajinayaan facebook iyo gameloft 🙁
Gameloft ma isticmaasho adeegyo iskutallaab ama hal, sababtaa awgood ma awoodi doontid inaad la ciyaartid mid ka mid ah ciyaartooda khadka tooska ah isticmaale leh nidaam kale oo hawlgal ah (sida Android).
Waxaan hayaa iPhone 6 oo leh iOS 9.1. Runtuna waa ciyaar aan kugula talin lahaa in sawirada sifiican loo qabtay, haa, waa run in mararka qaar adeegaha uu xoogaa xirto laakiin aan wax culus aheyn Waxaan ciyaarayay usbuuc ((habka, aad ayaan u fiicanahay)) iyo maalmahaas waan ciyaarayay. Kaliya 2 jeer ayaan ka helaa serverka. runta ayaa mudan in laysku dayo!
Waa wax cajiib ah in aysan ku habboonayn iPhone 5… Miyay horeyba nooga saarayaan cusbooneysiinta?
Haye, ma sheegi kartaa haddii ay ku socoto 4s?
Ku jawaab Howuarh
Waa ciyaar aad u wanaagsan, xawaare sare ayey igu socotaa, waxaan haystaa iPhone 6S leh IOS 9.3.5 (13g36). Iyadoo aan la helin nooc cabashooyin ah, sawirada ayaa aad u wanaagsan, waligood ma burburaan, waligood kama tagin serverka, waxaan u ciyaarayay ku dhowaad bil isku xigta oo qumman. Waa in la ogaadaa inaan aad u fiicanahay Hahaha
Ku jawaab Chamafer
American Express ayaa Apple Pay keeni doonta dalka Spain
Apple waxay daabacdaa xayeysiin kale oo loogu talagalay iPhone 6s, markan waxaa jilaya Bill Hader